पार्टी अध्यक्ष नै त्याग्दै प्रचण्ड, यस्तो छ कारण ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
पार्टी अध्यक्ष नै त्याग्दै प्रचण्ड, यस्तो छ कारण !
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू पार्टी नेतृत्वको भूमिकाबाट बिदा हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । उमेरका हिसावले आफू ७० वर्षको नजिक पुगिसकेकाले पनि अब युवाहरुलाई पार्टीको नेतृत्व लिन आग्रह गरे ।
शनिबार माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लीग ९वाईसीएल०को राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ूउमेरका हिसावले हामी ७० वर्ष आसपासमा छौँ ।
संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षालाई अघि बढाउने जिम्मा अब तपाइँहरुको हो। तर तपाइँहरु नेतृत्व लिन तयार नभएसम्म छाड्न मिल्दैनू प्रचण्डले भनेका छन् । प्रचण्डले अब पार्टीको भूमिकाबाट बिदा भएर संस्मरण लेख्ने इच्छा रहेको समेत बताएका थिए । साथै पार्टीको नेतृत्वबाट बिदा भएर भिन्न भूमिकामा बस्ने इच्छा भएको उनले बताएका थिए । साथै सत्तारुढ गठबन्धन संविधानको रक्षा, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुदृढिकरणका लागि बनेको बताएका थिए । साथै गठबन्धनलाई बचाइराख्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।